by Anuj Bhai September 01, 2020
यतिबेला कोरोना भाईरस तिव्र गतिमा सर्वत्र फैलिईरहेको अवस्थाले गर्दा भाईरसको नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन गराएको छ । जसको असर सर्वसाधारणमाथि प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको छ । लकडाउन गराउँदा भाईरस फैलिनमा केहि नियन्त्रण त अवश्य भएकै होला, तर यसले सर्वसाधारण माथि नकरात्मक असर पनि उत्तिकै परेको छ । विशेष गरी यो समयमा व्यवसायहरुमा र कुनैपनि साना, ठूला कम्पनि संग आवद्ध भएर काम गरिरहेका व्यवसायीहरु तथा मजदुरहरुमा असर प्रत्यक्ष परिरहेको छ । उनिहरुले मासिक रुपमा पाउँदै आएका तलब सुविधाहरु पुर्ण रुपमा बन्द भएको अवस्था छ । जसको कारणले मानिसहरु एकदमै मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन् । यतिबेलाको यो संवेदनशील अवस्थामा आफ्नो व्यवसायलाई कसरी र कुन रुपमा अघि बढाउँदै लाने, के गर्ने भन्नेमा व्यवसायिहरु एकदमै अनभिज्ञ रहेका छन् । र अर्कोतिर सरकारले पनि यो समयमा कुनै स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरु अगाडी ल्याउन सकिरहेको छैन ।
आज म मेरो ब्लगमार्फत यतिबेलाको यो अवस्थामा व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यापारलाई कसरी कुन रुपमा अघि बढाउँदै लान सकिन्छ भन्ने विषयमा केहि लेख्न मन लाग्यो ।
यो संवेदनशील समयमा व्यवसायिहरुले व्यापारलाई डिजिटल प्रविधिबाट अगाडी बढाउनुपर्ने जरुरी देख्छु । तपाईंको कम्पनिको प्रडक्ट, तपाईंको सेवा तथा सर्भिस, तपाईंको व्यवसायलाई सम्भव भएसम्म डिजिटलको माध्यमबाट प्रमोशन गर्न वा सम्बन्धित ग्राहक सम्म पु¥याउनको लागि ठुलो भुमिका निर्वाह गर्दछ । हुन त अहिले जताततै लकडाउन भईरहेको छ । सरकारले ल्याएको सुरक्षा नीतिलाई अवलम्बन गरेरमात्रै बाहिर निस्कनुपर्ने अवस्था छ । तै पनि यस्तो बेला तपाईले ईन्टरनेटको साहारा लिनुभयो भने तपाईलाई धेरै सहज हुनेछ ।
तर यसका ेलागि हामी सबैजना ईन्टरनेटमा दक्ष नहुन पनि सक्छौं यदि तपाईलाई यसको बारेमा विस्तृत रुपमा जान्न चाहानुहुन्छ भने सम्बन्धित दक्ष ईन्टरनेट मार्केटिङ्ग कन्सल्ट्यान्ट हरुलाई सम्पर्क गरेर व्यापारलाई अगाडि बढाउनको लागि सल्लाह, सुझाव लिन सक्नुहुनेछ । र यदि अनलाईनबाटै सुझाव, ज्ञान लिन कन्सल्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने मलाई फेसबुकमार्फत सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ । यहाँहरुलाई सकेको म सहयोग गर्न सधैं तयार रहनेछु ।
र ईन्टरनेटमा आफ्नो व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि सर्वप्रथम अहिलेको समयमा करिब ३०–३५ हजार खर्च गरेर राम्रो, दक्ष वेब डिजाईनरसंग बसेर, परामर्श लिई एउटा राम्रो वेबसाईट बनाउन सक्नुहुन्छ । उक्त वेबसाइटमा तपाईको कम्पनि, प्रोडक्ट, सेवा, सुविधा, सर्भिस ईत्यादिको बारेमा राम्रारी अपडेट गरिएको होस् र सोहि वेबसाईटबाटै तपाईंको बारेमा चाहिएको सम्पूर्ण जानकारी ग्राहकले लिन सकोस् । वेबसाईटमार्फत नै ग्राहकले तपाईलाई सम्पर्क राखेर आफ्नो प्रडक्ट विक्री गर्ने वातावरण तयार पार्न सक्नुहोस् । किनकी यो कोविड अझै लम्बिने अवस्था देखिन्छ । त्यति सजिलै निमिट्यान्न हुने कुनै संकेत देखिदैन । त्यसैले पनि व्यापार व्यवसाय अघि बढाउन उत्कृष्ट वेबसाईडको अत्यावश्यक देखिन्छ ।
तर वेबसाईट बनाउनुभन्दा अगाडी तपाईं आफ्नो बिजिनेसको बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहन्छ । तपाईंको कम्पनिको सेवाको बारेमा विस्तृत रुपमा अगाडी बढाउनुपर्दछ । तपाईको कम्पनिको प्रोडक्ट के हो? सेवा के हो ? सर्भिस के हो ?त्यो प्रष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । र अर्को कुरा वेबसाईट निर्माण गर्दा वेब डिजाईनर ईन्टरनेट मार्केटिङ्गमा पनि दक्ष र दख्खल भएको हुनु जरुरी रहन्छ ।
यसको बारेमा विस्तृत रुपमा जानकारी लिन चाहानुहुन्छ भने हामी पनि केहि समय देखि नै वेबसाईट डिजाईन र ईन्टरनेट मार्केटिङ्ग संग सम्बन्धित विषयहरुमा काम गर्दै आइरहेका छौ । तपाईलाई यदि अनलाइनको माध्यमबाटै घरमै परामर्श लिन चाहानुहुन्छ भने पनि हामी तपाईलाई निःशुल्क विषयमा परामर्श दिनेछु ।
यसको फाइदा, बेफाइदा र यसको थालनी कसरी गर्न सकिन्छ । सरल नेपाली भाषामै तपाईलाई तालिमहरु उपलब्ध गराएर यसमा अगाडि बढाउनेछौ ।
हामी तपाईको व्यापारको बिषयमा गहन अध्ययन र अभ्यास गर्दै तपाईको बजार इन्टरनेटमै खोज्नेछौ र बिक्रि गर्ने छौ घरबाटै तपाईको प्रडक्टलाई ।
त्यसकारण वेबसाइट, सेल्स पेज र इन्टरनेट मार्केटिङ विविध विषयमा जानकारी लिन चाहानुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला ।
Send Message : Click Here